ငါ Kubuntu 15.04 Beta2 ကိုစမ်းကြည့်ပြီးမင်းရဲ့ထင်မြင်ချက်ကိုချန်ထားခဲ့တယ် Linux မှ
ရက်အနည်းငယ်အကြာ Beta2၏ ** Kubuntu 15.04 ** သည်ဘာဖြစ်လိမ့်မည်နည်း။ မိနစ်အနည်းငယ်အကြာစမ်းသပ်ပြီးနောက်၊ ကျွန်ုပ်ခံတွင်းတွင်အလွန်အရသာရှိသည်။ ဒီ Beta မှာတွေ့ရမဲ့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အရာတွေကိုကြည့်ကြရအောင်။
1 KDE ၏စွမ်းအား
2 အခြားစိတ်ဝင်စားဖွယ်အသေးစိတ်အချက်အလက်များ - Kubuntu 15.04
3 Kubuntu 15.04 နိဂုံးချုပ်
** Kubuntu 15.04 ** ကျွန်ုပ်တို့ကိုယူဆောင်လာသည့်အရေးကြီးဆုံးပြောင်းလဲမှုမှာ KDE 4.X ၏လုံခြုံရေးနှင့်တည်ငြိမ်မှုကိုသူတို့လက်များဖွင့်ရန် ** Plasma5** ကိုဖယ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ ပထမဆုံး KDE 4.0 နှင့်မည်သည့် Kubuntu ဗားရှင်းကိုပထမဆုံးအကြိမ်ထွက်ပေါ်လာသည်ကိုကျွန်ုပ်မမှတ်မိပါ။ သို့သော်ကျွန်ုပ်ဘယ်တော့မှမမေ့နိုင်ပါ။ ၎င်းသည်ထိုအချိန်က desktop ၏မတည်ငြိမ်မှုကြောင့်လုံးဝပျက်စီးခြင်းဖြစ်သည်။
** Plasma5** နှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့သည်တူညီသောအရာတစ်ခုခုကိုအမြဲတမ်းလိုလားသော်လည်း၎င်းသည်ထိုအချိန်နှင့်တူသည်ဟုမထင်ပါ။ စမ်းသပ်ခြင်း ** Plasma5** ကိုစတင်မိတ်ဆက်စဉ်ကတည်းက၎င်းသည်တဖြည်းဖြည်းနှင့်ရင့်ကျက်လာသည်ကိုအမှန်တကယ်တွေ့မြင်ခဲ့ပြီးအမှန်တကယ်ပျောက်ဆုံးနေသေးသောအသေးစိတ်အချက်အလက်များမှာအလွန်သေးငယ်သည်။ စိတ်အနှောင့်အယှက်ဆုံးဖြစ်ဖွယ်ရှိသည်မှာ Pidgin ကဲ့သို့အပလီကေးရှင်းအချို့သည် system tray တွင်အိုင်ကွန်ကိုမပြပါ။ သို့သော် ** Plasma5** မှရရှိသောအားသာချက်များနှင့်တိုးတက်မှုအချို့အား ** Kubuntu 15.04 ** တွင်ယူဆောင်လာပါကထိုအရာများကိုမေ့သွားလိမ့်မည်။
* Login * မျက်နှာပြင်သို့ရောက်သောအခါဤ Desktop Environment ၏ပုံရိပ်နှင့်ဒီဇိုင်းကိုတာဝန်ယူသော * Team * ၏ကျေးဇူးကြောင့် KDE developer များမှကောင်းမွန်သောဂရုစိုက်မှုကိုမြင်တွေ့နိုင်သည်။ သော့ခတ်မြင်ကွင်းတွင်တွေ့ရသည့်တူညီသောအသွင်အပြင် -
Desktop ကိုကြည့်ရှုသောအခါကျွန်ုပ်သတိပြုရမည့်အချက်မှာ၎င်းသည်မည်မျှ“ ရိုးရှင်းသော” ဖြစ်သနည်း၊ အရောင်အတွက်သော်လည်းအရသာရှိလှသည်မှာသေချာသည်။ ဥပမာတစ်ခုမှာသမ္မာသတိရှိခြင်း၊ ကြော့ရှင်းပြီးအလွန်ပြားသော KDE Applications menu ဖြစ်သည်။
Plasma တွင်မှောင်မိုက်သော themes များကိုနှစ်သက်သူများအတွက် Desktop အတွက်အခင်းအကျင်း * Breeze * သည်ကျွန်ုပ်တို့အား * Dark * version ကိုလည်းထောက်ပံ့ပေးသောကြောင့် -
ဤ Beta ၏ * Live CD * နှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်ကြိုက်နှစ်သက်သောနောက်ထပ်အချက်တစ်ခုမှာ၎င်းတို့တွင်လိုအပ်သော GTK applications များပါ ၀ င်သည်။ ** LibreOffice ** နှင့် ** Mozilla Firefox ** သာဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် default font သည် ** Oxygen Font ** ဖြစ်သည်။ KDE အတွက်အထူးဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသောဖောင့်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အားစနစ်၏ပုံမှန် anti-aliasing * နှင့်မယုံကြည်နိုင်သော်လည်းအခြားတစ်ခုကိုလည်းအမြဲတမ်းအဆုံးသတ်သည်။ သူတို့အဖွဲ့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့၏အချက်အလက်များကိုကြည့်ရှုရန်ရွေးချယ်နိုင်သည့် KDE Preferences Center သို့လည်းထည့်သွင်းခဲ့သည်။
** Plasma5** နှင့်အသစ်အဆန်းများသို့ပြန်သွားသောအခါယခု audio player ကိုထိန်းချုပ်ရန် * applet * ကိုထည့်သွင်းထားသည်။
** Kubuntu 15.04 ** တွင်မူအလွန်အသုံးဝင်သော KDE Telepathy ကိုစတင်ရန်အခြား * applet * တစ်ခုထည့်သွင်းထားသည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်မူ ** Plasma5** ** တွင်၎င်းတို့သည်ကျွန်ုပ်ထင်မြင်ချက်ကိုမျိုသိပ်ထားသည့်ပူဖောင်းများတွင် floating notifications များကိုထည့်သွင်းခြင်းအားဖြင့် (ကျွန်ုပ်အမြင်) နောက်သို့ခြေလှမ်းတစ်ခုလှမ်းခဲ့သည်။ ၎င်းတို့ပျောက်ကွယ်သွားသည်နှင့်တပြိုင်နက် panel ပေါ်တွင်ပုံမှန်မြင်နိုင်ပါသည်။
ငါကနောက်ပြန်ခြေလှမ်းလို့ပြောတယ်၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ KDE4 နဲ့သင် panel ကနေ notifications တွေကို * detach လုပ်နိုင်တယ်၊ သူတို့က (bubble) မှာတူညီတဲ့ပုံသဏ္givenာန်ရှိတယ်။ ဒါပေမယ့်အဲဒါကိုလုပ်ဖို့ကျွန်ုပ်တို့မှာရွေးစရာရှိတယ်။ တစ်ခုခုကိုလမ်း, သူတို့ကယ့်ကိုကြည့်ရှုပါ။
အခြားစိတ်ဝင်စားဖွယ်အသေးစိတ်အချက်အလက်များ - Kubuntu 15.04
* LiveCD * ကိုစမ်းသပ်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်စိတ်ဝင်စားသောအခြားအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ** Kubuntu ကဲ့သို့သော GTK Theme အသစ် Orion ** တွင် GTK2 နှင့် GKT3 application များအတွက်မူကွဲရှိသည်။ ဒါ့အပြင်သူက * Fusion * လို့ခေါ်တဲ့ KDE အတွက်ဂရပ်ဖစ်စတိုင်အသစ်တစ်ခုထပ်ထည့်လိုက်တယ်။
ကျွန်တော့်အာရုံကိုဖမ်းစားနိုင်တဲ့နောက်အချက်ကတော့ ** Kate ** ကိုရေးနေချိန်မှာငါထွက်လက်မှတ်ထိုးခဲ့တယ်။ ငါပြန်ရောက်လာသည့်အခါကျွန်ုပ်သည်ဖွင့်ခဲ့သည် ** ကိတ် ** သည်ကျွန်ုပ်သည်မှတ်စုများစွာကိုသိမ်းဆည်းပြီးသိမ်းဆည်းထားခြင်းမရှိဟုထပ်မံနုတ်ထွက်ခဲ့သည်၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်ဤအရာကိုတွေ့ခဲ့သည်။
၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အားမတိုင်မှီ / အပြောင်းအလဲအပြောင်းအလဲများကိုမြင်ခွင့်ရရုံသာမကကျွန်ုပ်ရေးသားခဲ့သည့်အရာများကိုပြန်လည်မှတ်မိစေခဲ့သည်။ သင်ဘယ်လိုထင်ပါလဲ? ဒီဟာအရင်ကရှိခဲ့ရင်ငါမနက်စာအတွက်စားတာ had
screenshot တွင်တွေ့ရသည့်အတိုင်း၊ ကျွန်ုပ်သည်ဤ beta * တွင်မကောင်းသောအရာဟုညွှန်ပြနေသည့်အချက်များအကြား LibreOffice သည်အနည်းငယ်ပိုမိုချစ်ခင်တွယ်တာမှုလိုအပ်သည်ဖြစ်သောကြောင့် KDE နှင့်ပေါင်းစည်းခြင်းသည်လုံးဝမဆိုးပါ။ သို့သော် menu ထဲတွင်ကျွန်ုပ်တို့မသိပါ ကျွန်တော်အချို့ option ကိုအပေါ်ကိုရပ်တန့်သောအခါ။
ဒီအပိုင်းကိုအပြီးသတ်ဖို့အတွက်ငါတန်ဖိုးထားရမယ့်အသေးစိတ်အချက်အလက်အချို့ကိုကျွန်ုပ်အသိအမှတ်ပြုရမည်။ ပထမအချက်အနေဖြင့်အခြားသောဖြန့်ဝေမှုများသည် device ၏ mount point ကို * / run / media / user / device / * သို့ပြောင်းလဲသွားသော်လည်း Kubuntu သည်၎င်း point ကို * / media / user / device / * တွင်ထားရှိသည်။ နောက်ထပ်အချက်တစ်ခုမှာ KDE Connect ပါဝင်ခြင်းသည် Android ဖုန်းမှကျွန်ုပ်တို့၏စနစ်နှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်ခြင်းဖြစ်သည်။
Kubuntu 15.04 နိဂုံးချုပ်
စမ်းသပ်ခြင်းတိုတောင်းသော်လည်း၊ ** Kubuntu 15.04 ** သည်အသင့်ဖြစ်ပြီ ဖြစ်၍ ** Plasma5** ကိုလက်ခံရန်အသင့်ဖြစ်ပြီ။ KaOS ပြီးနောက် Kubuntu 15.04 သည်အခြားမိတ်ဆွေများကိုအကြံပြုမည့် Plasma5 * အခြားဖြန့်ချီမှုတစ်ခုဖြစ်လိမ့်မည်။ ယခုငါနောက်ဆုံးဗားရှင်းကိုထပ်ကြိုးစားရန်နှင့်ငါ့အမြင်နှင့်အတူမှန်လျှင်အတည်ပြုရန်စောင့်ဆိုင်းပါလိမ့်မယ်။
Kubuntu 15.04 Beta2ကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲပါ
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » applications များ » ငါ Kubuntu 15.04 Beta2 ကိုစမ်းကြည့်ပြီးမင်းရဲ့ထင်မြင်ချက်ကိုချန်ထားခဲ့တယ်။ )
Obi-wan kenobi ဟုသူကပြောသည်
စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသည်။ တည်ငြိမ်သော version ထွက်ပေါ်လာသည့်အခါAprilပြီလတွင်ကျွန်ုပ်တို့တွေ့လိမ့်မည်။
PS: ၁၅.၀၄ သည် LTS လား။ ငါထင်တာကအတွဲတွေ၊ ၁၄.၀၄၊ ၁၆.၀၄ ။
Obi-Wan Kenobi အားပြန်ပြောပါ
အဆိုပါအားလုံးအတွက်, ဒါပေမယ့် XX.04 နှင့်အတူ။
XX.10 no ။
စမ်းသပ်ခြင်းကာလတိုသော်လည်း Kubuntu 15.04 သည် Plasma5ကိုလက်ခံရရှိရန်အဆင်သင့်ရှိပြီးအဆင်သင့်ဖြစ်ပြီဟုယုံကြည်သည်။ LTS ထုတ်လုပ်မှုတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်လုံခြုံမှုနှင့်တည်ငြိမ်မှုကိုပြင်ဆင်နိုင်ရမည်။
ကျွန်တော်သိထားသည့်အတိုင်း LTS ဖြန့်ချိမှုနှင့်မသက်ဆိုင်ပါ။ LTS သည် ၂ နှစ်လျှင်တစ်ကြိမ်ထွက်လာပြီးလက်ရှိမှာ ၁၄.၀၄ LTS ဖြစ်သည်။ နောက်တစ်မျိုးမှာ ၁၆.၀၄ LTS ဖြစ်သည်။ https://wiki.ubuntu.com/LTS
အခုတော့စမ်းသပ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး: အမှန်တရားကတော့ distro ဟာစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်၊ ငါလက်ခံရရှိတဲ့အထွေထွေအသွင်အပြင်ကိုငါကြိုက်တယ်။ ငါတို့ကြိုးစားကြည့်ရ ဦး မယ်🙂
ဟုတ်ပါတယ်။ .04s အားလုံးသည် LTS: D. ။ ဆုံးမပဲ့ပြင်မှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်, ယခုငါ fix ။
နောက်ဆုံးဗားရှင်းကိုကျွန်တော်စမ်းချင်တယ်၊ ဒီ beta ကိုကျွန်တော့်လက်တော့ပ်မှာစမ်းသပ်ကြည့်တဲ့အခါသူတို့ပျောက်ကွယ်သွားတာဒါမှမဟုတ်မျက်တောင်ခတ်ခြင်း၊ ပိတ်ခြင်းစတဲ့ပြတင်းပေါက်တွေကိုရွှေ့လိုက်ရင်တကယ်ကိုစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေပါတယ်။ နောက်ဆုံးဗားရှင်းကကျွန်တော့်အတွက်အသုံးဝင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်၊ Aprilပြီလမှာကြိုးစားမယ်။
ငါဖြန့်ဝေပေးတဲ့စမ်းသပ်ခန်းမှာ AMD Radeon 7310 HD ရှိတယ်၊ အခုအချိန်မှာသူက Antergos နဲ့ gnome ယေဘူယျအားဖြင့်ရွေ့လျားနေတယ်။
၁၄.၁၀ နဲ့ပလာစမာ (၅) နဲ့ကြုံခဲ့ရတယ်။ တည်ငြိမ်တဲ့ AMD ဒရိုင်ဘာကိုသက်ဝင်လှုပ်ရှားစေခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်အဲဒါကိုဖြေရှင်းခဲ့တယ်။ အခု ၁၅.၀၀ မှာငါမလိုအပ်တော့ဘူး။
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ, ငါဒီဗားရှင်း, beta ကိုနေဆဲသော်လည်း, ငါ့လက်ရှိလက်တော့ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်အကောင်းဆုံးအလုပ်လုပ်ခဲ့သည် (နှင့်ငါ 14.10 ကနေ updated ကြောင်း) ကြောင်းစဉ်းစားပါ။ အမှန်တရား ... ငါတကယ်ကြိုက်တယ်။ ကျွန်ုပ်တွင် application တစ်ဝက်ကိုဖယ်ရှားပေးသောပြwithနာများနှင့် system startup တွင်သာပေါ်ပေါက်လာမည့် kmix များသာရှိသည်။ အရာအားလုံးစုံလင်ကြောင်း Fixed! နှင့်ဘာသာစကားထောက်ခံမှု, ငါ 14.10 alpha Plasma5မှာအများဆုံးလွဲချော်သောအရာကိုပါပဲ။
မင်္ဂလာပါ .. ဒေါ်လာသန်းချီသောမေးခွန်းမေးခွန်း Compiz Fusion ကိုကျွန်ုပ်မည်သို့လုပ်ရမည်နည်း။
KDE မှ Compiz Fusion? ဒါကမလိုအပ်ပါဘူး .. 😉
၎င်းသည် KWin ဖြစ်သောကြောင့်မလိုအပ်ပါသလော။ Compiz ဟာခေတ်နောက်ကျသွားပြီဖြစ်သောကြောင့်မလိုအပ်ပါဘူး။ Compiz သည်ကုန်ထုတ်စွမ်းအားကိုမကူညီသောကြောင့်၎င်းသည်မလိုအပ်ပါသလော။
ကောင်းသောရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်မေးခွန်းများငါ I ရှင်းလင်း။
compiz cube သည် kwin's ထက်ပိုမိုလှပသည်
ကောင်းပြီ၊ ငါ Plasma5ကိုမကြိုက်ဘူး၊ Kaos, Manjaro, Kubuntu နဲ့ Arch မှာစမ်းကြည့်ပြီးငါ့ကိုမယုံဘူး။ ရင်းမြစ်တွေကမကောင်းဘူး။ Kde4 လောက်ငါ့ကိုများများစားစားစားတယ်၊ ကြိမ်ဖန်များစွာပျက်တတ်တယ်။ sdmm က Kdm လိုပဲနှေးနှေးတယ်။ ယေဘုယျအားဖြင့်တော့ Kde4facelift နဲ့တူတယ်။ Kde4ဟာတည်ငြိမ်ပြီးယုံကြည်စိတ်ချရပြီးလုံခြုံမှုရှိရင် Amarok သို့မဟုတ် Konqueror ကဲ့သို့သောအချိန်ကြာမြင့်စွာမထိရသေးသည့် icon အသစ်များ၊ themes အသစ်များနှင့် applications များကိုတိုးတက်အောင်ပြုလုပ်ပါ။
plasma5ဝေးတစ် ဦး မျက်နှာကိုဓာတ်လှေကားထက်ကျော်လွန်သွား .. 😉
ကောင်းပြီ၊ သင်၌ပြproblemsနာများရှိနေသည်။ မကြာသေးမီကပြုပြင်ထားသော plasma update 5.2.2 မတိုင်မီတွင်၎င်းသည်သော့ခတ်။ မရတော့ပါ။ Qt5 ဖြစ်သောကြောင့်၎င်းသည်မျက်နှာချင်းဆိုင်မဟုတ်ပါ။ စားသုံးမှုပမာဏသည် plasma desktop4နှင့် 400 megabytes အတူတူဖြစ်သည်။ Amarok? ဒါပေမယ့်သူက desktop နဲ့ဘာမှမဆိုင်ပါဘူး။ o_O
သူတို့ဖြေရှင်းပြီးပြီဆိုပေမယ့်ငါနွေရာသီမှာသုံးဖို့စောင့်တော့မယ်။ ကျနော့်အမြင်မှာတော့အစိမ်းရောင်ပဲ၊ Gnome3ကိုငါပြန်သတိရလိုက်တာကအမှားအယွင်းတွေပြည့်နေတယ်။
Amarok အကြောင်းကျွန်တော်ပြောခဲ့တာက Kde application အချို့သည်အချိန်ကြာမြင့်စွာစွန့်ခွာသွားသောကြောင့် desktop များကိုအသုံးပြုခြင်းထက်ဤ application များနှင့်အစောပိုင်းထားသင့်သည်။
အကယ်၍ KDE4သည်ဤမျှလောက်ပွတ်တိုက်ခြင်းခံရပါက၎င်းကိုအသုံးပြုခြင်းကိုရပ်တန့်ခြင်းသည် ၀ မ်းသာဖွယ်ကောင်းပါမည်လော။ အနည်းဆုံးအချို့အချိန်များအတွက်။
KDE4ကိုဘယ်လောက်ကြာကြာအသုံးပြုနိုင်ပါသလဲ။
ငါ KDE ကိုအချိန်ကြာမြင့်စွာမသုံးခဲ့ဘူး၊ ဒါပေမယ့်အမှန်တရားကတော့သူတို့ဟာအလှအပအဆင့်မှာမျက်နှာကောင်းတဲ့မျက်နှာကိုမြှင့်တင်လိုက်ပြီဆိုတာပါပဲ။ ကျနော့်အမြင်တွင်ဤအချက်များသည်အမှတ်များစွာရရှိခဲ့ပြီးဖြစ်သည်၊
၂၀၁၂ ခုနှစ်မှစ၍ ငါ Gnome နှင့် (သို့မဟုတ်) အနကျအဓိပ်ပါယျ (cinammon) မှ Xfce သို့ပြောင်းသောအခါဤနောက်ဆုံးပတ်ဝန်းကျင် (အထူးသဖြင့်ကျွန်ုပ်မျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်းနှင့်ကိုက်ညီသောဗားရှင်း ၄.၁၂ အသစ်နှင့်အတူ) သည်အလွန်သက်တောင့်သက်သာရှိသည်ဟု KDE အကြောင်းပြောကြသည် ငါသိချင်တာတွေကိုဖယ်ထုတ်ရုံနဲ့ငါ့ကိုပေးနေပြီ ...
ငါ့ကို Linux သို့မသွားရန်တစ်ခုတည်းသောအရာက ၀ င်းဒိုးရှိဘက်ထရီပြissueနာကြောင့် ၁ နာရီခွဲပြုပြင်ပြီးတဲ့နောက် Linux မှာ ၃ နာရီလောက်ကြာလိမ့်မယ်။
Ubuntu Gnome ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကိုကျွန်တော်သတိပြုမိပါတယ်။
မအောင်မြင်ဘူး Ubuntu MATE ^^ ကိုရည်ညွှန်းနေတယ် (Gnome ကိုငါမစမ်းသေးဘူး) ။
သုံးစွဲမှုကိုလျှော့ချရန် TLP ကိုသင်တပ်ဆင်သင့်သည်။ .PAPA ကိုသုံးပါ၊ ခဏလေးသင်ထည့်ပြီးပါပြီ။ ၎င်းသည်အံ့ဖွယ်မဟုတ်ပါ၊ သို့သော်သုံးစွဲမှုကို ၁၀ မှ ၂၀% အကြားလျှော့ချနိုင်သည်။
ကျွန်တော့်ဘက်ထရီက ၆ နာရီခန့်ကြာပါတယ်
ငါ gnome ကိုစွန့်ခွာပြီး kde ကိုသွားသင့်သည်ဟုခံစားမိသည်။ ပုံမှန်အားဖြင့်၎င်းတွင်ပါဝင်သောပရိုဂရမ်အချို့ရှိသည်
၎င်းသည် Kubuntu တွင်ပထမဆုံးပြုလုပ်သော KDE5အကောင်အထည်ဖော်မှုဖြစ်သည်ကိုဂရုမစိုက်ပါ။ သို့သော် LTS မှထွက်ခွာသင့်မသင့်ကိုကျွန်ုပ်မသိပါ။ ၁ လတောင်မပြည့်သေးခင်မှာပထမဆုံးအကြိမ်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းကိုစောင့်ဆိုင်းမှာပါ။ virtual machine တစ်ခုမှာကြိုးစားခဲ့ပြီး Gnome ၏အမြင့်မှာ 1mb ခန့်ရှိပေမယ့်သူကချောချောမွေ့မွေ့သွားသည်။
OFFTOPIC - KDE မှာရှိတဲ့ရွံရှာဖွယ်ကောင်းတဲ့ AMARO / clementine ကဲ့သို့စက်ဆုပ်ရွံရှာဖွယ်ကောင်းသောမည်သည့်အသံဖွင့်စက်ကိုမဆိုမည်သူမဆိုသိလား။ ငါသဲကန္တာရကိုကြိုက်တယ်၊ ဒါပေမယ့် GTK ပဲ။
ဂီတဖွင့်စက်တစ်သန်းရှိတယ်။ QT ဖြစ်ရင် Tomahawk (သို့) YaRock ကိုသွားမယ်။ သူတို့မှာအားနည်းချက်တွေရှိတယ်၊ ဒါပေမဲ့တော်တော်တော်တယ်။
Cantata ကိုကြိုးစားပါ၊ အရမ်းပြီးပြည့်စုံပြီး Amarok သို့မဟုတ် Clementine ထက်အရင်းအမြစ်များကိုအများကြီးအသုံးမပြုပါနှင့်။
နှင့် GTK ဖြစ်ရန်လိုအပ်သနည်း
၎င်းသည်ကွဲပြားခြားနားသည်။ KDE သည် 1GB RAM နှင့် Atom ပရိုဆက်ဆာတစ်လုံးပါသည့် Netbook ပေါ်တွင်ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်နိုင်သည်။ ဒါကြောင့်သင်၌ရှိသည်သောဟာ့ဒ်ဝဲပေါ်တွင်မူတည်သည်။
KDE interface အသစ်သည် Nitrux (KDE) + TYPE [: ZERO] icon suite နှင့်အလွန်ကောင်းမွန်သည်။ အရမ်းမဆိုးပါဘူးသူတို့ကအခမဲ့မဟုတ်ပါဘူး
ငါ kde ကိုကြိုးစားကြည့်ပြီးဘဝမှာနည်းနည်းလေးမျှသာဖြစ်သကဲ့သို့၊ ကျွန်ုပ်သေချာသည် - ကျွန်ုပ်သည် KDE ကိုလုံးဝမကြိုက်ပါ၊
kde လိုငါလည်း gnome ကိုမကြိုက်ဘူး။ ကျွန်ုပ်က XFCE လိုလားသူပါ။ ဒါပေမယ့်ဒါဟာအရသာကိစ္စတစ်ခုပါ။
elav ငါကိုယ်တိုင် Plasma5၏ဒီဇိုင်းကိုကြိုက်တယ်သို့သော်တည်ငြိမ်မှုပြissueနာကြောင့်။ ကျွန်ုပ် KDE4၌အချိန်အတော်ကြာနေခဲ့ရသည်။ သို့မဟုတ်အနည်းဆုံး Plasma5၏တည်ငြိမ်သော version ထွက်မလာမှီတိုင်အောင်။
ယခုအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်သည် KDE4နှင့်အလွန်သက်တောင့်သက်သာရှိသည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်သည် Plasma5ကိုကြိုးစားရန်ကြိုးစားနေသည်။
ကကြိုးစားရန်ပေမယ့်။ ငါဒုတိယ hard drive တစ်ခုတွင် Linux Mint ၏ KDE ပါသောအသစ်စက်စက်ကော်ပီတစ်ခုတပ်ဆင်လိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်ပါသည်။ ဒီတော့ Plasma5မှာတစ်ခုခုပျက်သွားရင်ဘာမှမဆုံးရှုံးတော့ဘူး။ 🙂
ငါလည်းအတူတူပဲ။ ငါ KDE4 နဲ့ခဏကြာလိမ့်မယ်ထင်ပေမယ့်အခြား PC တစ်ခုမှာ Plasma5 ကိုငါစမ်းသုံးကြည့်နိုင်သေးတယ်။ 😉
ကျွန်ုပ်သည် mouse အသုံးပြုသူဖြစ်သော်လည်း 3gb Intel i4 ကွန်ပျူတာကိုဝယ်ယူလိုက်သည်။ KDE သည်ဤစက်နှင့်မည်သို့ပြုမူမည်နည်း။
ငါမှာ Intel Core i5 ပေါ်မှာရှိတယ်၊
ငါ Fedora မှာစမ်းကြည့်ပြီးအရမ်းစိမ်းနေတုန်းပဲ။
၎င်းတွင် desktop အိုင်ကွန်များမရှိ၊ ၎င်းကိုထည့်ရန်နည်းလမ်းလည်းမရှိပါ (ရိုးရာအသုံးပြုသူများမပါ) ၎င်းသည်ရိုးရာအသုံးပြုသူကိုအနိုင်ရလိုလျှင်မကောင်းပါ။
Dolphin, Konqueror စသဖြင့် Qt5 တွင်အခြေခံကျသောအသုံးချပရိုဂရမ်များပျောက်နေသည်။ kof4နဲ့5ကြားမှာဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့ spawn hybrid ကိုငါမကြိုက်ဘူး
KDE control center တွင်များစွာသော configuration module များပျောက်နေသည်။ ပရင်တာကိုပြုပြင်မရနိုင်ပါ။
Applications ကို notification bar သို့လျှော့ချ။ မရပါ။
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေကျွန်ုပ်၏ရိုးရာ KDE4 ကိုကျွန်ုပ်အသုံးပြုနေပြီ၊ သင်ပုံမှန်အားဖြင့်၎င်းကိုထည့်သွင်းလိုပါကသင်သည်ဤပြproblemsနာများကို ဦး စွာဖြေရှင်းပြီးပြီသို့မဟုတ်အနည်းဆုံး KDE4 ကိုအသုံးပြုရန်ရွေးချယ်ခွင့်ရှိသည်။
ဒါက Fedora မှာ KDE5 နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အတွေ့အကြုံပဲ။ အခြားဖြန့်ဖြူးတဲ့နေရာတွေမှာတော့ကွဲပြားခြားနားပေမဲ့အများစုကတော့မှားတယ်လို့တော့မထင်ပါဘူး။
lucas အနက်ရောင် ဟုသူကပြောသည်
အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအားဖြင့်ပေးနိုငျသောအမှန်တရား။ ဂရပ်ဖစ်ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်ပတ်သက်။ ပေမယ့် ... ။ ငါ gnome နှင့် kde ပိုပြီးပြတင်းပေါက် (ဖြစ်နိုင်လျှင်) ပိုပြီးစဉ်းစားကြောင်းနားလည်သဘောပေါက်လိမ့်မယ် အခု ၁ နှစ်လောက်ကငါ xfce1 ကိုသုံးတယ်။ ကျွန်ုပ်၏ပထမ ဦး ဆုံး PC သည်အရင်းအမြစ်နိမ့်သောကြောင့်ပထမ ဦး စွာကျွန်ုပ်ရွေးခဲ့သည်။ သို့သော်၎င်းသည် Windows XP တွင်ကဲ့သို့တည်ငြိမ်ပြီးအမြဲတမ်းပုံသေ desktop paradigm ဖြစ်သောကြောင့်ဆက်လက်ရွေးချယ်ခဲ့သည်။ ငါယုံကြည်ပြီး GNU / Linux အသုံးပြုသူများ (အားလုံးမဟုတ်သော်လည်းအနည်းဆုံးများစွာသော) သည်ကျွန်ုပ်၏အတွေ့အကြုံအရ ၂ နှစ်လျှင်တစ်ကြိမ်လုပ်ရန်မလိုချင်ပါ။ task bar သည်မလိုအပ်သောအရာများသို့မဟုတ်မနက်ဖြန်တွင်ရှိမည့်ခလုပ်များကိုပြလျှင် ဒီနေရာမှာရှိတယ်, ဒါမှမဟုတ်ယနေ့ control panel များတလမ်းတည်းနှင့်နက်ဖြန်အခြားဖြစ်ကြလျှင်။ Plasma (kde 4) ကတော်တော်လှတယ်။ ကြည့်ရတာဆွဲဆောင်မှုရှိသည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘောလုံးနှင့်ပြည့်နေပြီး desktop နှင့် notebbok မလိုအပ်သောအရာများပြောင်းလဲသွားသည်၊ ပြောင်းလဲသွားသည်၊ ပြောင်းလဲ၍ ကြီးထွားပုံမပေါ်သော“ ဂရပ်ဖစ်ဆင့်ကဲပြောင်းလဲမှု” ကြောင့်ဖြစ်သည်။
Application တွေမြန်လာတာနဲ့ driver တွေ boot speed၊ kernel တို့အတူတကွအလုပ်လုပ်သလိုအရင်ကအရင်းအမြစ်တွေနဲ့အတူတူပိုကောင်းလာတယ်။ သူတို့သည်အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲ၏အံ့ဖွယ်ရာများဖြစ်သည်။ ဂရပ်ဖစ်ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်အတူပတ်ပတ်လည် fuck ဆိုတဲ့မ။
lucas black သို့ပြန်သွားရန်
DJ Naufrago ဟုသူကပြောသည်
ဆောင်းပါးကောင်း အပေါ်ကကြည့်လိုက်တော့တော်တော်လေးကြည့်ကောင်းတယ်။ Ubuntu မိသားစု၏နောက်ဆုံးထွက်ဗားရှင်းများနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်၏မှားယွင်းစွာပြောဆိုခြင်းသည်အများစုမှာ hardware နှင့်အလွန်အကျွံတောင်းဆိုမှုများကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဒီအလင်းကိုတိတိကျကျသတ်မှတ်လို့မရဘူးထင်ပါတယ်။
Dj Naufrago အားပြန်ပြောပါ
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်ပြီးခဲ့သည့်လက Linux Mint ၁၇.၁ ကိုအလွန်ကြိုက်နှစ်သက်သည့် distros အမြောက်အများကိုစမ်းသပ်ခဲ့သည်။ သစ်ကြံပိုးမှကျွန်ုပ်သည် Fedora 17.1 သို့သွားခြင်းကိုမကြိုက်သလောက်သာဖြစ်သော်လည်းကျွန်ုပ်ကိုပျော်ရွှင်မှုမပေးသောအရာတစ်ခုရှိသည်။ ယခုငါ kubuntu 21 နှင့်ကြိုးစားခဲ့သည် ငါစိတ် ၀ င်စားသည်မှာအရာရာတိုင်းရှိသော Desktop တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဗေဒသည်အလွန်ဂရုတစိုက်နှင့်ထိုးထွင်းသိမြင်မှုရှိသောလင်းပိုင်သည်ကျွန်ုပ်ကိုအံ့အားသင့်ဖွယ်ကောင်းပုံရသည်။ ကျွန်ုပ်လိုအပ်သောအရာအားလုံးရှိသည်။ ကျွန်ုပ်အတွက်ကောင်းစွာအလုပ်မလုပ်သောတစ်ခုတည်းသောအရာက droopbox နှင့်၎င်းနှင့်သူပြောသော kMenu တွင်ပေါင်းစည်းခြင်းဖြစ်သည် search to search ငါ Terminal (သို့) konsole ကိုရေးပြီးဘာမှမရှာပါဘူး။ သူတို့ကအဲဒါကိုပြင်ပေးမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ် (ဒါကတခြားတစ်ယောက်ယောက်ဖြစ်ပျက်ရင်ငါမသိဘူး)၊ ဒါပေမယ့်မဟုတ်ရင်ငါ KDE15.04 မှာပဲနေတယ်ထင်လို့အစကတည်းကအဆုံးသတ်သွားခဲ့တယ်။
သူတို့ဘာလုပ်ခဲ့သလဲဆိုတာကျွန်တော်မသိပါဘူး။ Arch ကိုအသစ်တင်လိုက်တာကကောင်းပါတယ်။ ယေဘုယျအားဖြင့် desktop သည်မြန်မြန်ဆန်ဆန်ပြုမူနေပါသည်။ ဖြစ်နိုင်သည်နောက်ကျကျန်နေသည်။ ယခုနောက်ကျသွားပြီဖြစ်သည်။
ငါ Kubuntu 15.04 ကိုလွန်ခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်ကစမ်းသပ်ခဲ့ပါတယ်။ အမှန်တရားကတော့ကျွန်တော်အရမ်းကြိုက်တယ်၊ ငါဟာ KDE ကိုသူ့ရဲ့လှပမှုအတွက်ဘာမှမထက်ပိုပြီးမပါဝင်ဖူးဘူးဆိုတာဝန်ခံတယ်၊ ဒါပေမယ့် KDE မှာအလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ Dolphin, Okular, K3b လိုမျိုးကောင်းမွန်တဲ့ application တွေရှိတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောပြရမယ်။ ၎င်းသည် Xubuntu ထက် RAM အမြောက်အမြားသုံးစွဲသော်လည်း၊ ကျွန်ုပ်၏ဟောင်း PC (AMD64x2 4Gb RAM နှင့်ပေါင်းစပ်ထားသော NVIDIA ကဒ်) တွင်ဤဗားရှင်းသည်အလွန်ချောချောမွေ့မွေ့ကောင်းမွန်။ ကောင်းမွန်သောအလုပ်ဖြစ်သည်။
ငါ ၁၅.၀၄ သန့်ရှင်းတဲ့တပ်ဆင်မှုကိုကြိုးစားခဲ့တယ်၊ ငါ Nvidia GS15.04 ဂရပ်ဖစ်ကဒ်ကိုမယူဘူး အရှက် ...
ဆက်ဆက်4ဟုသူကပြောသည်
Kubuntu 15.04 ကိုကြိုးစားခဲ့သည်၊ အလွန်ကောင်းမွန်သော KDE, သို့သော်၎င်း desktop နှင့်အလုပ်လုပ်နိုင်ခြင်းမရှိခြင်း၊ ငါဖယ်ရှားပစ်အဆုံးသတ် Kubuntu 14.10 သို့ပြန်သွားလေ၏
windows 8 နဲ့တူတယ်
ကောင်းပြီဂရပ်ဖစ်၊ စွမ်းဆောင်ရည်နဲ့ startup နဲ့ပတ်သက်ပြီးကောင်းမွန်တယ်၊ ငါကျရှုံးတာကို system ထဲကို ၀ င်တိုင်းအသံကိုပြန်လည်ပြုပြင်ရမယ်၊ ဖိုင်ကိုပြုပြင်မွမ်းမံလို့ရမလားမသိဘူး၊ ဒါကြောင့်ငါလုပ်ဖို့မလိုဘူး။ ငါ pc သို့မဟုတ် restart လုပ် ကျွန်ုပ်၏အိုးတွင် ၂.၅GHz ဟော်တယ် Athlon dual-core ပရိုဆက်ဆာ၊ 2.5GB RAM၊ ပေါင်းစပ်ထားသောအသံကဒ်နှင့် 4Gb Ati ဗီဒီယိုကဒ်ရှိသည်။
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်၏နှိမ့်ချသောအမြင်ကိုဖော်ပြလိုပါသည်။ ကျွန်ုပ်သည်ဆောင်းပါးရေးသားသူနှင့်အလွန်သဘောတူသော်လည်းပလာစမာ ၅ ကိုကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်မထောက်ခံခဲ့ပါ။ ၎င်းသည်မတူကွဲပြားမှုအတွင်း၌အာခေးဖနောင့်ဖြစ်နိုင်သည့်ပြproblemsနာအချို့ကိုဖြေရှင်းရန်လိုအပ်သည်ဟုကျွန်ုပ်ရိုးရိုးသားသားယုံကြည်ပါသည်။ Desktop ပတ် ၀ န်းကျင်များ။
ကျွန်ုပ်သည် Kubuntu 15.04 ကိုစမ်းသပ်မှုအချို့ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး 420GB RAM ပါသော HP Brand Laptop မော်ဒယ်2တွင်တပ်ဆင်ခဲ့ပြီးအောက်ပါတို့ကိုကြည့်ပါ။
အမြန်နှုန်း - Laptop စမ်းသပ်မှုအကန့်အသတ်ရှိပေမယ့် Kubuntu သည်သူ့အစ်ကို Ubuntu 15.04 နှင့်ကွန်ပျူတာတစ်လုံးတည်းတွင်တပ်ဆင်ထားသည်နှင့်အတော်လေးမြန်သည်ကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်။
ဒီဇိုင်း - KDE ပါ ၀ င်သူများသည်ဤအချက်နှင့် ပတ်သက်၍ အလွန်စိတ် ၀ င်စားကြသည်ဟုစာရေးသူပြောခဲ့သည့်အတိုင်း၎င်းသည်အနည်းဆုံးငါမြင်တွေ့ခဲ့သမျှသောအလှပဆုံးဒီဇိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်မှာသေချာသည်။ Desktop ။
Office အလိုအလျောက် - ပုံမှန်အားဖြင့် LibreOffice အနေဖြင့် libreoffice သည် Microrobo ၏ Office ကိုကျော်လွှားရန်အနည်းငယ်သာလိုအပ်သော်လည်း၊ ကျွန်ုပ်ထင်မြင်ချက်သည်၎င်းသည်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်စရာဖြစ်သည်။
Personal Manager: Kontact လို့ပြောစရာမလိုပါဘူး။ သူ့နယ်ပယ်မှာအကောင်းဆုံးလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ ဒီပရိုဂရမ်က Outlook (သို့) Thunderbird ကိုယ်တိုင်ထက်ပိုပြီးအသုံး ၀ င်ဖို့အလုပ်ကိုကျိုးနွံစွာပေးခဲ့သည်။
၁.- ၎င်းသည်စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ရန်အနည်းငယ်ကုန်ကျသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ပုံသေအားဖြင့် Brize theme နှင့်ပါ ၀ င်သည်မှာ ပို၍ ဆိုးသည်။
2.- Amarok၊ ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျကျွန်ုပ်သည်ကြိုက်နှစ်သက်ခြင်းမရှိခဲ့ပါက၎င်းသည်အတည်ငြိမ်ဆုံးဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံရလျှင်အလွန်ရှုပ်ထွေးသွားသည်ကိုတွေ့ရသောကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်ကြိုက်နှစ်သက်ခြင်းမရှိခဲ့ပါ။
၃။ အကောင်းဆုံးမှတ်တမ်းများမှာအနည်းဆုံး Kubuntu3သည်ဂရပ်ဖစ်များနှင့် ပတ်သက်၍ ကြီးမားသောပြproblemနာတစ်ခုဖြစ်နေသည်။ မျက်နှာပြင်တောက်ပနေသောကြောင့်အချို့သောဘလော့ဂ်များတွင်ရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းသည်ဤပြproblemနာကိုမဖြေရှင်းနိုင်သော Kubuntu သူများအတွက်ခေါင်းကိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဖြစ်နိုင်သည် Plasma 15.04 ၏ Achilles ဖနောင့်ဖြစ်နိုင်သည်…ပုံ Fedora5သည်အပြောင်းအလဲအချို့ ပြုလုပ်၍ ဤပြproblemနာအတွက်အနည်းငယ်သောအဖြေတစ်ခုကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်။
အတိုချုပ်ပြောရရင်၊ Plasma5အကြောင်းအများကြီးပြောလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လအနည်းငယ်အကြာဒါမှမဟုတ် Kubuntu 16.04 (ထွက်လာရင်) ထွက်လာရင်အနည်းဆုံး Ubuntu ကနေလုံးဝထွက်ခွာသွားလို့ပါ။ ထိုနေ့ရက်ကိုမည်သူသိသနည်း။
နောက်ဆုံးမှာကျွန်တော်တို့ဟာ Robosoft7ဒါမှမဟုတ် Robosoft 10 ကိုမသုံးဖို့ခွင့်ပြုထားတဲ့အခမဲ့ရွေးချယ်စရာတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ ကျွန်မရဲ့အပိုင်းအတွက် Kubuntu ပလာစမာ5နဲ့တည်ငြိမ်တဲ့အထိစောင့်ချင်တယ်။
ရှင်းလင်းချက် - ကျွန်ုပ်၏အမြင်သည်ကွန်ပျူတာသိပ္ပံပညာဗဟုသုတရှိသူတစ် ဦး ထံမှဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်သာမာန်အသုံးပြုသူတစ် ဦး ဖြစ်သည်။
ငါ Windows ကိုစို့ကြောင်းပြောနိုင် !!!!
julius mejia ဟုသူကပြောသည်
နောက်ဆုံးအနေနဲ့တစ်စုံတစ် ဦး ကအိမ်စာကိုလုပ်ပြီးပြီ။ သူတို့မှာ front audio output ကိုအသိအမှတ်ပြုရန်ပြaနာတစ်ခုရှိသည်။ desktop PC များရှိပြီး front jack နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော headset ကိုသုံးသောသူများအတွက်အရေးကြီးသည်။ ယခု kmix ကို configure လုပ်ထားလျှင်အရေးကြီးသည်။ ကွန်ပြူတာကိုပြန်ဖွင့်ပြီးတဲ့အခါမှာ configuration ပျောက်သွားတယ်။ ဖန်သားပြင်မှာတောက်ပနေတဲ့အရာဟာပုံမှန်အားဖြင့်ဖြစ်တတ်တယ်၊ သင်ကရုပ်ရှင်ကြည့်တဲ့အခါ (သို့) ၀ င်းဒိုးအတော်များများနဲ့တေးဂီတကိုနားထောင်တဲ့အခါ၊ ရုပ်ရှင်ကြည့်တဲ့အခါ၊ ပြတင်းပေါက်များစွာဖွင့်ပြီးသီချင်းနားထောင်တဲ့အခါ၊ မျက်နှာပြင်သည်လုံးဝအနက်ရောင်ဖြစ်နေပြီး desktop bar သို့မဟုတ် task manager ကဲ့သို့ဖြစ်သော်လည်းဤထင်မြင်ချက်ကိုကျွန်ုပ်ယခုတင်ပြနေသည့်နေရာမှကျွန်ုပ်၏အစွမ်းထက်။ တည်ငြိမ်သော KUBUNTU2ကိုပြန်လည် install လုပ်ခြင်းဖြင့်မည်သည့်အရာမှထွက်ပေါ်လာခြင်းမရှိပါ။ ကျွန်တော့်ကွန်ပျူတာမှာ AMD ATHLON ပရိုဆက်ဆာ 14.10 × 2.5 Ghz x2 64 Gb RAM DD 4Tb, Graphics Radeon 1 4550GB RAM ရှိတယ်
julio mejia အားပြန်ပြောပါ
ငါဟက်ကာ၊ လွန်ခဲ့တဲ့ ၅၀၀ လောက်ကပြောခဲ့သလိုငါဂရပ်ဖစ်ကဒ်အတွက် AMD driver တည်ငြိမ်အောင်ပြသခြင်းဖြင့်ပြickနာကိုဖြေရှင်းခဲ့တယ်။
Eliud Gomez ဟုသူကပြောသည်
FromLinux မှ Hello Friends: ငါ Kubuntu 15.04 ကို install လုပ်ပြီ။ သင်၏ SMplayer youtube Browser application များသည်ကျွန်ုပ်အတွက်အလုပ်မလုပ်ပါ။ ငါ youtube ပေါ်တွင်ဗွီဒီယိုများရှာဖွေခြင်း, option ကိုအတွက်, ငါ SMplayer အတွက် tab ကို activate ငါကပြောသည်, dialog box တစ်ခုကပြောပါတယ်: အမှား: youtube server ကိုချိတ်ဆက်မရပါ။ ဒီပြsolveနာကိုကျွန်တော်ဖြေရှင်းနိုင်မလား။ ငါအရမ်းတန်ဖိုးထားလိမ့်မယ်။ မင်းရဲ့အဖြေကိုမျှော်လင့်ပါတယ်
သင့်ရဲ့တေးဂီတဖွင့်စက်ရှိသင့်တဲ့အင်္ဂါရပ် ၆ ခု